आजको राशिफल तपाईंको आजको दिन कस्तो छ त?::देश र जनताप्रति समर्पित
आजको राशिफल तपाईंको आजको दिन कस्तो छ त?
मेष (चु चे चो ला लि लु ले लो अ)
कार्य कुशलताले गर्दा सबै क्षेत्रमा चर्चा चल्नेछ । कुलकुटुम्बहरुको साथ सहयोले मन प्रशन्न रहला । आकस्मीक धन लाभको योग रहेको छ । हराएका सामान हरु फेला पर्न सक्नेछन । ब्यापार ब्यबसायमा रामा्रे समय रहेको छ ।
बृष (इ उ ए ओ बा बि बु बे बो)
मान्यजनहरुको साथसहयोले कार्य सहज हुनेछ । सामाजिक कार्यमा बिशेष फाईदा हुनेछ । बौधिक ब्यक्तित्व हरु सगँको भेटघाट फाईदा मुलक रहनेछ । सामान्य काममा धेरै समय र परीश्रम खर्चिनु पर्नेछ ।
मिथुन (का कि कु घ ङ छ के को ह)
पुराना मित्रहरु सगँको भेटले मनमा उत्साहा जाग्नेछ । नयाँ कार्यको थालनिले तपाईको भाग्योदय हुन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । अरुको निम्ति सामान्य खर्च गर्नु पर्ला । पराक्रममा बृद्यि हुनाले कार्य सम्पादनमा सहज हुनेछ ।
कर्कट (हि हु हे हो डा डि डु डे डो)
अरुको भर पर्दा कार्यक्षेत्रमा सामान्य अप्जस आउन सक्ने सम्भाबना रहेको छ । खानपानको क्षेत्रमा बिशेष ध्यान दिनु होला । मानसिक चन्चलताले गर्दा कार्य दिगो नरहन सक्छ । खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ ।
सिंह (मा मि मु मे मो टा टि टु ट)
कन्या (टो प पि पु ष ण ठ पे पो)
खुट्टा तान्ने ब्यक्तिहरु बाट बच्नु पर्ने समय रहेको छ । सामान्य कार्यको निम्ति धेरै समय र परीश्रम खर्चनु पनेछ । आर्थिक अभाबको सामन गर्नु पर्ला । मनमा सामान्य चिन्ताले बास गर्नेछ । दिन मध्यम रहला ।
तुला (र रि रु रे रो ता ति तु ते)
बृश्चिक (तो ना नि नु ने नो या यि यु)
सबार साधनको प्रयोगमा बिशेष ध्यान दिनु होला । सभासम्मेलनमा सहभागि हुन सक्ने योग रहेको छ । मानसम्मान प्राप्तिको सम्भाबना रहेको छ । ब्यापार ब्यवसायमा समय राम्रो रहेको छ । आम्दानि मध्यम रहला ।
धनु (ये यो भ भि भु ध फा ढ भे)
मकर (भो ज जि खि खु खे खो गा गि)
मीन (दि दु थ झ ञ दे दो च चि)
आजको दिन शुभ रहाेस्।
असार २४ गते तपाईंको दिनको कस्तो रहनेछ हेर्नुस् आजको राशिफल
भाद्र १ गते तपाइको दिन कति फलदायी छ हेर्नुस् आजको राशिफल
जेठ ४ गते कुन राशि कति शुभ छ ? हेर्नुस् आजको राशिफल
असार ९ गतेको राशिफल, कसलाइ कति फलदायी हुनेछ
जेठ २५ गतेकाे राशिफल कसलाई कति शुभ ? हेर्नुस्